मन्त्रीले भने- कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ! - Deshko News Deshko News मन्त्रीले भने- कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ! - Deshko News
मन्त्रीले भने- कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन !
जकार्ता, जेठ १७
इन्डोनेसियाका एक मन्त्रीले कोरोनाभाइरसलाई महिलासँग तुलना गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
उनको ‘सेक्सिस्ट’ अभिव्यक्ति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा महिला समूह र सामाजिक अभियन्ताहरुले उनको कडा आलोचना गरेका छन् । साथै उनको अभनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रीले स्थानीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुमाझ अनलाइन मार्फत उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।